अबको दिनमा मुलुकको शिक्षा प्रणाली कस्तो होला ? - NewsNepal HD
डा. हरिप्रसाद लम्साल (सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिँहदरबार, काठमाडौँ ।)
By न्युज नेपाल एच.डी	 On ३१ श्रावण २०७८, आईतवार २०:२७
कोभिड १९ ले मानव जीवनमाथी नै प्रश्न उठाइरहेको बेलामा शिक्षामा अब के होला भन्ने प्रश्नले खासै महत्व नपाउन सक्ला । शिक्षा नर्मल सिचुएशनमा त प्राथमिकतामा परेको थिएन भने अब त झन के पर्ला र ?
कोभिड १९ को बन्दबन्दीले शैक्षिक संस्था बन्द भए । विद्यार्थी शिक्षक घरमै रहन बाध्य भए । अर्को विकल्प पनि थिएन । शैक्षिक संस्था नै नखुलेको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइको कुरा के गर्नु ? परीक्षामात्रै लिन पनि कठिन देखियो । बिना परीक्षा माथिल्लो कक्षाका जाने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ । फरक विधि प्रयोग गर्न हामीले नसक्ने अनि गरिआएका विधिबाट काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा शिक्षा प्रणाली पुग्यो । परीक्षा नदिइकन माथि जान पाउने अवस्था अहिलेका लागि त ठिकै लाग्दै होला कतिलाइ, तर यसको असर जीवन रहेसम्म रहनसक्छ ।
विगतको दशकमा शिक्षामा खर्च बढेको छ । तालिम लिने शिक्षकको सङ्ख्या बढेको छ । प्रशासनिक खर्च बढेको छ । संघियता कार्यान्वयन पश्चात शिक्षा हेर्ने सरकारको सङ्ख्या बढेको छ । बैठक र सुझाव दिने मात्रा बढेको छ । गैरसरकारी संस्था बढेका छन् । तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रकाशित गरेको अध्ययनका प्राप्तिका अनुसार बितेको दशकमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आएन । अध्ययन अनुसन्धानले सिकाइ उपलब्धि नबढ्नुका कारण पनि उजागर गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्तो रहेको सिकाइ कोभिड १९ पछि के भयो होला ? यसैका कारणले शिक्षक विद्यार्थिको भेट हुनै छाडेपछि सिकाइ अझ कमजोर हुनसक्छ । शायद यसले पनि ओह्रालो यात्रा तय गरेको हुनसक्छ ।
कक्षा १० को नतिजा विद्यालयले दिएको प्राप्ताङ्कका आधारमा प्रकाशित भयो । कस्तो रह्यो भन्नेमा यहाँ खासै चर्चा गर्न नपरिरहला । कोहि कसैप्रति जवाफदेही हुनै नपर्ने अवस्था देखियो । कक्षा १२ को परीक्षा हुनै बाँकी छ । यो परीक्षा कसरी भन्ने विषय निर्क्यौल हुनै बाँकी छ । भरखरै चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ शिक्षा क्षेत्रका स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परिक्षा लिइ नतिजा प्रकाशन गर्यो । प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाए अनुसार चाहिने सङ्ख्यामा पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । भनाइको मतलब ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउन सकेनन् । यसका पछाडि मुख्य दुइ कारण हुनसक्छन । पहिलो विद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हामीले सोचेभन्दा पनि तल छ । दोश्रो, परीक्षा पद्धतिमा केहि कमजोरी रहे । यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन निचोड निकाल्न कठिन छ । निचोड जे आएपनि एउटा यथार्थ चाँहि भन्न सकिन्छ कि मुलुकको शिक्षा प्रणाली स्वस्थ छैन ।
कोभिड १९ कै बीचमा पनि मानविय जीवन दुखसुख चलेकै छ । बन्दाबन्दी बाहेक विस्तारै दैनन्दिनी नियमिततामा आउन थालेको छनक पाइन्छ । भय र त्रासका बीचमा मानवीय कृयाकलाप जेनतेन चलेकै छन् । सिमित उद्योग व्यवशाय केहि मात्रामा भए पनि चलेकै छन् । कतिपय क्षेत्र अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको यथार्थ पनि हाम्रा सामु छ नै । सञ्चालनमा आउन नसकेको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो । शिक्षाका कार्यालयहरु खुलेकै छन् । विद्यालयका कार्यालय खुलेकै छन भनेर मान्नु पर्छ । तर शैक्षिक कृयाकलापका लागि धेरैजसो विद्यालय र शैक्षिक संस्था बन्द जस्तै छन् । यस बीचमा पनि शिक्षा प्रणालीभित्रका केहि संस्थाहरुले भर्चुअल प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ कृयाकलाप सञ्चालनमा ल्याइरहे, परीक्षा पनि लिइ रहे । केहि गर्ने र नगर्नेलाइ एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रचलन छ । नगरेकालाइ केहि भए पनि गर्न लगाउन हाम्रा संयन्त्र चुके । भएको क्षमता प्रयोग गर्न लगाउन पनि सकिएन ।
शुरुवाती रुझानले देखाएअनुसार मुलुकमा अबका दिनमा उच्च शिक्षा जेनतेन भर्चुअल प्रणालीमा जाने देखिन्छ । तर विद्यालय शिक्षा के होला ? मुलुकमा सबै तथ्याङ्क जोड्दा पनि अझ ७० प्रतिशतभन्दा बढि बालबालिका भर्चुअल वा यस्तै अन्य प्रणालीबाट शैक्षिक कृयाकलापमा जोडिन सकेका छैनन् । यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तालिम तथा प्रयोगात्मक अभ्यास के हुने ? उत्तर कसले दिने भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन् । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन र निर्देशिका ल्याएपछि कर्तव्य पुरा भएको सम्झ्यो । स्थानीय तहले संघले खाका नै दिएन भने पछि सकियो । अधिकारमा पो हानथाप हुन्छ । कर्तव्य त सबैले बिर्सने मध्येको फगत एक शब्द त हो नि ।
कोभिड १९ को बीचमा पनि शिक्षा प्रणालीको इनपुट(लगानी)मा खासै कमी आएको छैन् । भएको बजेटको अधिक हिस्सा खर्च भएकै छ । पुजीँगत खर्चमात्र हुन नसकेको हो । चालु प्रकृतिका अधिकाँश कार्यमा विनियोजन गरिएको बजेट सकिएकै छ । तर शैक्षिक प्रकृया चलेको छैन, उपलब्धिको मापन हुन सकेको छैन, भएको मापन पनि प्रभावकारी बनेको छैन् । शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेटबाट इनपुटको व्यवस्था, प्रकृया सञ्चालन र उपलब्धि मापन हुनुपर्थ्यो । तर यी तीनमध्ये पछिल्ला दुइ हुन सकेनन् । २०७६ सालको चैत्रवाट नै यी दुइ पक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । खर्च भइरहने शैक्षिक प्रकृया र उपलब्धि मापन नहुने अवस्थामा हामी रहेका छौँ । यसमा सुधार कसरी त ?
सुधारका लागि मोटामोटी रुपमा दुइ उपाय सतहमा देखिन्छन् । पहिलो, कोभिड १९ कै बीचमा विविध उपाय अवलम्बन गरी शिक्षक विद्यार्थी बीच संबाद जारी राख्ने । दोश्रो, कोभिड १९ सकिए पछिमात्र हाम्रा कृयाकलाप सुचारु गर्ने । दोश्रो उपायले हामीलाइ उन्नति होइन कि अधोगतितर्फ लैजाने निश्चित छ ।
शैक्षिक प्रकृया सञ्चालन र उपलब्धि मापन कसरी गर्ने त ?
तथ्याङ्कले देखाएअनुसार मुलुकमा कोभिड १९ बढ्दो क्रममा छ । दोश्रो लहर सकियो सकिएन थाहा भएन तर विज्ञहरुले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । माथि नै भनियो कि यस बीचमा पनि पुजीँगत बाहेकका चालु रकम खर्च गर्ने क्रममा खासै रोकावट आएको छैन् । कुनै राजनैतिक दलको भेला रोकिएको छैन् । विभिन्न खालका आन्दोलनमा कार्यक्रम रोकिएका छैनन् । अन्यायमा परेपछि आन्दोलन नभए के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि आउला नै । तर मुलुकमा शैक्षिक प्रकृया रोकिए जस्तै नै छ ।
किन यस्तो ? सरकारले गर्न नसकेको भन्ने उत्तर आइहाल्छ । ठूला काम त सरकारले नगरेको होला । ढँग पनि पुगेन होला । तर अन्य सरोकारवाला पक्षले गर्न सक्ने काम पनि रोकिएका छन् । विद्यार्थीले जति अङ्क पाउनु पर्थ्यो सो भन्दा बढि अङ्क दिन पनि रोकिएको छैन । गत वर्षको अनुभवका आधारमा यस वर्ष केहि सुधार हुन्छ कि भन्यो सो पनि देखिएन । विद्यार्थीलाइ सहयोग गर्न सकिएको छैन् । यसो भनेर सबैले नगरेको भन्ने पनि होइन । नगरेकाहरुको हकमा मात्र भन्न खोजिएको हो ।
अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै शैक्षिक प्रकृयालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने ? उपलब्धि मापन कसरी गर्ने भन्ने हो ? परिस्थिति कठिन भए पनि सिमित कृयाकलाप कसरी शुरु गर्ने ? भन्ने हो ।
अरु मुलुकले गरेको अभ्यासबाट केहि सिक्न सकिन्छ । तर हुबहु रुपमा लागू गर्न सकिदैन । शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा संबाद कसरी शुरु गर्ने ? सबैले उत्तर खोज्ने प्रश्न यहि होला । एकले अर्कोलाइ देखाएर उम्कने भन्दा पनि सामूहिक रुपमा उत्तर खोजि गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको खाँचो हो । एकअर्काको काममा सहयोग र समन्वय चाहिएको छ ।
वास्तविकता के हो भने विद्यालय र शिक्षक नै बढिभन्दा बढि जवाफदेहीन्नु पर्ने देखियो । यसो भनेर अरुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने होइन । शैक्षिक प्रणालीको महत्वपूर्ण अङ्ग विद्यालयमा हुने जवाफदेहीताले गर्न नगर्नमा धेरै प्रभाव पार्छ मात्र भन्न खोजिएको हो । अबका दिनमा स्थान विशेषभइ शैक्षिक कृयाकलाप तय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर कायम राख्न र सिकाइ न्यूनतम रुपमा भए पनि हासिल गराउन हाम्रा शैक्षिक प्रकृया कुनै न कुनै रुपमा सुचारु गर्नुको विकल्प छैन । भाइरस सकिएपछि शैक्षिक प्रकृया सुचारु गरौँला भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।
कोभिड १९ को त्रास कहिले सकिन्छ भन्नेमा अनुमान गर्न पनि कठिन बन्दै गएको छ । त्रास नै नसकिए पछि यसको असर र प्रभाव कति होला अहिल्यै अनुमान गर्न हतारो हुन्छ । यसको त्रास रहेसम्म वाच्ने कसरी र अन्य कृयाकलापमा लाग्ने कसरी ?
अबका दिनमा यी दुवै पक्षलाइ सँगै लैजानु पर्छ होला । तर एउटा सत्य के हो भने कोभिड १९ को समाप्ती पछि पनि मानव जीवन रहन्छ । मानिसका यावत् क्रियाकलाप चालु रहन्छन नै । भलै यस्ता क्रियाकलापमा ठूलो फेरबदल आउन पनि सक्लान् । शायद अबको दिनमा यससँगै मानव जीवन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । पुरानो अवस्थामा झैँ नर्मल अवस्था आउन त समय लाग्छ होला । अब हामिले बाच्ने संसार भनेको न्यू नर्मल होला । न्यू नर्मल संसार, जुन अहिलेको भन्दा फरक हुनसक्छ । भनाईको अर्थ यसको भय र त्रासका बीच नै हाम्रा शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडी बढाउन पर्छ नै । यसो भनेर भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरौँ भन्ने होयन । अवस्था अनुसारका विकल्प खोजी सोमा अभ्यस्त बन्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो ।
कोभिड १९ मा छोटो सप्लाइ चेनले काम गर्यो । जुन वस्तु वा सेवाको सप्लाइ चेन छोटो थियो सो कम प्रभावित हुनपुग्यो । तर लामो सप्लाइ चेन बढि प्रभावित भयो । यो महत्वपूर्ण सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा लागू हुन सक्छ । विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा लागु हुन सक्छ । विद्यालय समुदायको नजिकै भएमा शैक्षिक प्रक्रिया संचालनका लागि विकल्प धेरै हुन सक्ने रहेछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउने, शिक्षक नै समुदायमा जाने वा आलोपालो दुवै उपायको अवलम्बन गर्ने आदि हुनसक्छन् । कक्षाहरुलाई पालो गरेर विद्यालयमा बोलाउन पनि सकियो । यस अवधारणा बमोजिम आफ्ना छोराछोरीलाइ नजिककै विद्यालयसँग जोड्ने वा जोड्न लगाउने उपाय पनि हुनसक्छ ।
उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा अबका दिनमा प्रयोग गर्ने भनेको भर्चुअल, अनलाइन वा दूर शिक्षामा आधारित पद्धति नै होला । पाठहरु अनलाइन वा वेभ पोर्टलमा राख्न सकिन्छ, जुन सामग्रीहरु विद्यार्थीहरुले अनुकुल समयमा प्राप्त गरेर अध्ययन गर्न सकुन । प्रयोगात्मक कक्षा आवश्यक पर्ने विषयहरुमा शुरुमा सैद्धान्तिक विषयको पठनपाठन हुनसक्छ । पछि अवस्था हेरेर अभ्यास गराउने तालिका बनाउन सकिन्छ ।
भौतिक रुपमा उपस्थित भइ दिने परीक्षाको अब विकल्प खोज्नुपर्छ । विगतका अभ्यासबाट सिकेर त्यसका कमी कमजोरी केलाइ सुधार गर्नु पर्छ । खुला पुस्तक प्रणालीलाइ अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिल्यै देखि तयारी गर्नुपर्छ । संघीय तहमा सबै कक्षा र विषयका स्तरकृत प्रश्नपत्र बनाइ उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहमा विद्यालयले यस्ता परीक्षा लिने विधिको प्रयोग शायद अबको उपाय हुनसक्छ ।
विद्यार्थीको पठनपाठनमा अभिभावकलाइ पनि सहभागी बनाउनै पर्ने देखियो । अब दुवैको बीचमा सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि अहिले भएको भन्दा फरक ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षक र अभिभावकको बीचमा समन्वय गरेर दुवैलाइ उपयुक्त हुने समयमा कक्षा कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने परिपाटी अबलम्बन गर्नुपर्छ । तसर्थ सबै अभिभावकलाई यस प्रकृयामा समावेश गराउन अब ढिला गर्नु हुदैन् । डा. हरिप्रसाद लम्साल, सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिँहदरबार, काठमाडौँ । यसमा व्यक्त बिचार लेखकका निजी मत हुन । यसले संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन् ।
किसानलाई पेन्सन4views